Mogadishu Journal » 2018 » June » 10
Mjournal :-Taliska Ciidanka Booliska Dawladda Ingiriiska, ayaa maanta Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed waxay soo gaarsiiyeen Qalab Ciidan oo ka kooban, Jaakadaha Xabadda Celiya, Katiinadaha dambiileyaasha lagu xiro, iyo Dharka dhaxanta laga xirto. Qalabkan ayaa waxaa...
Griezmann oo aqbalay in uu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa & goorta la filayo in uu go’aankaasi qaato
Mjournal :-Atletico Madrid iyo France weeraryahankooda Antoine Griezmann ayaa aqbalay inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa maamlamaha soo aadan. 27-sano jirkan ayaa lal xeriirnayaa koxda La Liga daafacanaysa ee Barcelona ka dib waqti wacan uu Atletico uu ku qaatay. Griezmann, 27,...
Hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya oo gaaray Singapore
Mjournal :-Hogaamiyaha Kuuriyadda Woqooyi Kim jong Un ayaa gaaaray Wadanka Singapore si uu uga qayb galo shirka uu kula balansanyahay madaxweeybe Donald trump. Shirka taariikhiga ah ee u dhexeeeya labadda Masuul waxaa uu ka dici doonaa jasiiradda Sentosa Talaadada soo socota. Waa...
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay gaari xamuul ah oo ku rogmaday Degmada Hodan
Mjournal :-Gaari nuuca xamuulka qaada ah ayaa manta ku rogmaday xaafada Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Gaariga ayaa ka soo baxay sida la sheegay Dekada magaalada Muqdisho wuxuu ku sii jeeday suuqa Bakaaraha, wuxuuna siday Shixnad. Gaarigaas rogmaday waxaa ka dhashay...
Madaxtooyada oo lagu soo kordhiyay qalabka casriga ee amniga lagu sugo
Mjournal :-Madaxtooyada Villa Soomaaliya oo ah halka looga taliyo dalka ayaa waxaa ka bilowday dayactir kala duwan oo isugu jira mid amni iyo bilicda, si Madaxtooyada ay ula mid noqoto Madaxtooyada caalamka. Ammaanka Madaxtooyada ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana lagu soo...
Ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda oo isaga baxay Baar-Sanguuni
Mjournal :-Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Degaaanka Baar-sanguuni, Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa baneeyay Degaankaasi, kadib markii ay kordheen weerarada Shabaab ay la beegsanayaan halkaasi. Degaanka Baar-sanguuni oo qiyaastii 50-KM dhinaca waqooyi...
Muran badan oo ka dhashay Shirkii dalalka G-7
Mjournal :-Dalka Canada ayaa lagu oo gabagabeeyay Shirkii u dhaxeeyay dalalka G 7, waxaana laga soo saaray qodobo ay qaar ka mid ah Madaxdii Shirkii G7 ka qeyb galay ay diideen in ay saxiixaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegey in wakiiladiisa aysan saxiixan war...
Kheyre oo kormeeray xalay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xasan Cali Kheyre ayaa xalay kormeer ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka Magaalada Muqdisho, waxaana uu halkaasi kula kulmay Saraakiisha ciidamada. Kormeerka Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa ku wehlinaayay maamulka gobolka Banaadir iyo...